Rubber Raw Ihe Ịcha Machine - China Qingdao Otu ebe Machinery
Rubber Raw Ihe Ịcha Machine
Product Description ojiji Rubber akụrụngwa ọnwụ ígwè bụ otu n'ime kasị eji ngwá na ngwaọrụ processing.It bụ-eji bee eke roba, sịntetik roba, na ndị ọzọ na plastic ihe n'ime obere iberibe, nke igbo chọrọ. Ọzọkwa, ọ bụ kwesịrị ekwesị na-arụnyere nso roba igwekota. Structure atụmatụ a roba ọnwụ igwe dị mfe owuwu, ezi uche imewe na-adaba adaba na ime. Ọ na tumadi ẹkewetde igbutusi mma, etiti, cylinder, agbụrụ nke raw ete ...
Rubber akụrụngwa ọnwụ ígwè bụ otu n'ime kasị eji ngwá na ngwaọrụ processing.It bụ-eji bee eke roba, sịntetik roba, na ndị ọzọ na plastic ihe n'ime obere iberibe, nke igbo chọrọ. Ọzọkwa, ọ bụ kwesịrị ekwesị na-arụnyere nso roba igwekota.
Nke a roba ọnwụ igwe dị mfe owuwu, ezi uche imewe na-adaba adaba na ime. Ọ na tumadi gụnyere ọnwụ mma, etiti, cylinder, agbụrụ nke raw roba na haịdrọlik system.It adopts na ebutu valvụ akara ịzọpụta ike.
The ụzọ nchedo ute arụnyere n'okpuru ọnwụ mma iji chebe ihu ọnwụ knife.When arụ ọrụ, na-etinye ndu roba n'okpuru ọnwụ mma na bee ya n'ime obere iberibe adabara roba Ịgwakọta site presser nke haịdrọlik mmanụ cylinder.
Oil cylinder nsogbu (KN)
Rubber ọnwụ njem oge (S)
N'ozuzu akụkụ (L * W * H)
Osote: Rubber Myọcha strainer Extruder Machine
Ugboro abụọ apụta Rubber Cutting Machine
New Ọnọdụ Rubber slippers Cutting Machine
na Philippines roba ọnwụ igwe
Ụgbọelu Rubber Cutting Machine
Rubber echebe Cutting Machine
roba ngọngọ ọnwụ igwe
roba sooks ọnwụ igwe
OGE echebe Cutting Machine
Taia Cutting Machinery
Taia Cutting recycled Rubber ntụ ntụ
Taia Shredder Rubber Cutting Machine
Trade nkwa Rubber slippers Cutting Machine
Taia Cutting Machine
ultrasonic Rubber Ịcha Machine
Waste Taya na Rubber Raw Ihe Ịcha Machines
Waste Taia cutter Machine
Waste Taia Cutting Machine
Waste Taia cutter
Waya echebe Cutting Machine
High Pressure braided Plastic tube Knitting WEA ...
Rubber mpempe akwụkwọ Suspension ogbe Off Unit
Kọmpat Structure Iburu Type Rubber Open Mixi ...